Hayyuleen fi Qabsa’oon Oromoo diiree qabsoon isaan waamteti argamuuf qoophida. Oromoon hundi Qee’ee isaa egachuuf of qoophesuu qaba.
Oromoo lafa fi enyumaa isaa habashoon irra saman deebifachuuf Madawalabuti tessuma ji’a 6 fudhatee goochun hoji fi dirqama walif qoodun murte dabarsee irrati hundaun cimanan waan hojeetef milka’uu dandayee ture. Harasi Oromoo Oromoo sababa fi sabilamii Ethiopia hunda caalaa midhan kan irrati gegefamuu waan ta’eef midha fi dararami isaa irra ga’uu kun qabsoo hadhoftu akkan adeemsisu isaa gargara.
Oromoo cimma goodhe diina tufachuu koo miti. Garuu gidira wagga 150 ol keessa dabareetu muxannoo rakkina irra argane kana irrati hunda’uun rakkon kana dura nu mudachaa ture akka nu hin mudanee goochuuf qoopha’uu qabna jeedhen. Diinaf kan bitamee yoo ta’ee malee bilisummaa Oromoo kan hin barbnee hin jiru, Oromoo Abbba Gaanfa Africka goochuuf amoo Oromoon tokkuman qabsoo isaa gegesuu qaba. Sababin isaa Oromoon tokkuma dhabuun isaa Habashootan cabuu danda’ee jeedhan beektoon fi qooratoon adunya hundi bareessan jiru. Oromoo gaafa mari’atee itti qoophayee Madawalabuti lola egalee bu’aa ini galmeesee darbe ragadha.
Kanaafu Oromoo wacaa Habashaf gura lachuu dhisee wal jala hiriree Oromiyya bilisoomsuu qaba. Oromoo biyya Hola na gargara jeedhu tokko ilee akka hin qabnee beekuu qaba. Holan keenya diina keenya, sababin isaa hunda isaantu nu nyachuuf nu qoophefacha jira, ykn amoo Oromoon angoo yoo qabate nu liqimsuu jeedhan waan nu sodatanfi kara hunda milii Qabso keenya akka lafa hin qabnane goodhu. ABO biyya Ethiopia keessa lole biyya kan base warana TPLF caalaa warana Shabiya ture. Angoo Ethiopia hunda TPLF akka dhunfatu kan goodhe Shabiya ture. Shabiyan dogogra kana dura rawwateti itti gabuu isaa yeero heedu dubacha turu ilee ama ilee dogogora lamafa hojeechuu hin danda’uu jeechuu hin dandeenyu. Hundi feedhi isaa malee fidhi uumata ykn feedhi biyya biraf kan hojeetu hin jiru. Oromoon haririroo garii Shabiyya waliin qabu akkuma jiruti ta’ee garuu amoo qabsoo isaa kara biyya keessas of irrati hirkatee lamii isaa amansifatee qabsoo ittifufu qaba.
Siyyasi Adunya heedu babada adeemuu isaa biyoon demokarsi gudiifna jeedhen biyoon mirga dhalanama egisifna jeedhan fayyida biyya isaanf dursa keenun Siriya, Yemen fi Iraqi keessati yaakka isaan hojeetan arga jira, kanaafu Eritrea, USA ykn Europan uumataa Oromoo ykn biyya Oromiyaa fayyida tokko malee gargaruu jeechun of gowomsudha. Wagoota 100 darban Europa, USA fi biyya Araba Qabsoo’ota Kurdi irrati dulan mancasan, hara gaafa rakkon itti dhufuu Europa keessa adeeeman Qabsa’oota Kurdi funanani gurmessa jiru, dhiira dhaban Dubartoota leenjisuuf dirqaman jiru. Kana ilaalchisun Ebla 23, bara 2015 Europa paarliamaa keessati waan ani iti dubadhe tokko hara yeeroodha yoo ABO gargaratani Naga fi Tasgabi Ganfa Africka keessati akka bu’uu goochuu batan Abida barabaratu Gaanfa Afrika keessati dhalachuuf deema, Oromoon jabatee bakka isaaf maluu ga’uu banan Teerstoon(shororkessitoon) Gaanfa Afrika dhunfachuu caaraa argatu jeedhe ture. Europa, USA, Eritrea fi biyoon Africka hola Ethiopia jiran Gaafi, Feedhi fi Bilisummaa uumatii Oromoo waga 40 ol qabsa’af jiru kana irra tarkanfana yoo jeedhen bala hanga yoonati hin argamintuu Gaanfa Africk mudata.
Habashoon utuu gooti isaan diree hin ga'iin dhadachuu egalan Oromoo ilee goota waga 40 laga akka qabuu maliif dagatan, Prof. fi Doktorn Oromoo ilee diree qabsoo hunda irrati hirmachaturan hirmacha jiru, Media fi gartuu isaan dhadhesuu yoo dhaban ilee Qabsoon keenya lamuu Oromoo akka Habashati dabarsan ilanee waadan isiif gala. ABO Gaafa booba'aa nun jeedhe diire hunda irrati argamuuf qoophidha, Oromoon Qabsoo isaa cimminan yoo gargarsa goodhe ABO hanqina humana nama hin qabuu, qabsoo ogannuuf muxannoo enyuu lee caalaa qaba. Goota kumatama Umurii gutuu qabsoo irra jiran diiree irra qabna, Gootota qabsoo irra turan diireti deemuu qoophi ta’aan kumataa hirirsuuf qoophidha, Oromoo Milliona 50 keessa goota heedu madisisuuu ilee ni dandeenya. Tefaye G/AB Qabsoon uumataa Oromoo yoomi ilee uumataa Oromoon degeramuu qaba, sababin isaa Habashoon Dhaabilee Oromoo facassan of jala hirirsuu yaluu Oromoon lamafa gowomuu hin qabu jeedhe ture.
ABOn Qaciili Qaciilee keesumeesuu yoo dadhabee malee nami lolaf of qoophese jira, Loltun ABO durani Hara Medical Dokter ta’aan jiran dire deemani loltu Oromoo walanuuf qoophi irra jiru, Hayuulee Oromoo kalesssa yeeroo Murasa keessati Systema Barumsa Ethiopia Jijiran akka Ibsa Gutama, Hayuun Diplomasi Akka Abiyuu Geleta fi Amhid Husen faa kasee, loltu Oromoo Dargif, ABOf lolan hunda bakka jiran akka waakoo lafa keessa ol yaasuuf qoophidha. Midha, Roororo, Dararan, Ajeechan uumataa Oromoo irra ga’uu hunda keenya du’aa du’aa caaluu nuti ta’ee jira. Kanafu Nu Oromoon kan loluu Ango ykn fayyidaf utuu hin tanee of wareegamnee uumataa keenya garbuma wagga 150 jala basuuf. Yeeroo Habashan nu bituuf boosana adeemee gegeraruu na amoo Europa fi mana keenya teeny bo’uu irra dire deemne diina tokko ajeenee du’uun seexadha. Barana kan duluuf qoophee loltuu qoofa utuu hin tanee Artistoon Oromoo yeeroo dheeraf tokko ta’aa jeedhan waamicha davbarsa turan barana amoo qaman diiree lolati argamuu wara nuti iyyata jiran keessa heedu maqa dha’uu ni dandeenya.
Waani nama Gamachisuu Oromoo waamicha goodhamuu tumsuuf qoophi ta’uu isaati. Dargagoon Rooororo wayyanen Baqatee Nairobi, Kakuma, Dadahab, Sudan Kaba fi Kiba keessa jiran, Yemen keessati rakacha jira Oromiyaa seenan loluuf qoophidha. Europa fi USA irra jarsoolii Oromoo dabalatee Oromoo qulqulun direti boba’uuf qoophidha. Akka wara Habasha dhadachuu dhifne malee loluuf qoophi qabna.
Oromoon lola hin oleef yeeroo of qoophesuu mal goochuu qaba:-
Oromoon biyya keessa jiru OPDO dabalatee kana booda lafa abba isaa irra diini akka hin qaxamuuree falmachuu qaba Tigire Oromoo ajeeftuu Buqisuu fi Amhara Siirna garbuma deebisuuf akka Prof. Getachew Hilee faan dhadacha jiran kana awalcha isaan gadi fageesuu qaba
Qeeroon bartooni fi dargagoon Oromoo Ganda jiran keessati wal gurmessun, leenji siyyasa fi oganuma wal barsisun lafa abba isaan irrati lulu qabu. Amerika fi Europa deeman garbuma lamafaf ashkaruma fi garaduma biyya Araba yaaduu hin qaban lolan abba biyya ta’uu qoopha’uuu qabu.
Diasporan Oromoo kara walka dhabachuu keessa bayee qabsoo ABO wagga 40 gegessa jira kana waan dandayee hundan gargaruu qaba keesumati Qoorcha fi Malaqa Geegiba waraana WBO akka qaqabuu goochun dirqama lamumati.
Hayuuleen, Oromoo Prof. Doktorn fi Ogantoon siyyassa Oromoo bakka hundati socho’an uumataa fi hawwasa keessa jiran dire qabsoon itti soochoosuf of ilee dura bu’uun sochuu qabu.
Shamaran Oromoo QBO keessati sadarka olana qabuu ama ilee qabsooti dhiira kakasuu akkasumas sabata isaan hikani waan jiruu WBO fi Qeeroo Oromoo gumachuu qabuu.
Loltun Oromoo siirna wayyane keessa jirtan hundi Rooroon Oromoo irrati wayyanen raawwacha jiru kun isiinti dhaga’um hin olee erga ta’ee qawwee batan fudhatan WBOti makamun lammii keessan salphina basuu qabdu.
OPDO Habashoon wal gurmessan jiru, Shabiyan TPLF haraa fi BADN hara qoophefatee dhufa jira, TPLF amoo Oromoo wagoota dheeraf bituuf falmacha jira OPDOn ilee lammii keessan biraa goruuf murtefachuu qabdu.
Uumani Oromoo Loli fi Qabsoon wareegama fi yeero dheera fudhachuu akka danda’uu beekun waan hundafi of qoophesuu qaba,
Dhabbileen biyya keessa Wayyane Buqisuuf Qabsoo hidhannoo murtessa ta’uu amanan fudhachuun goota bosona dhufaa jiru haalaa mijeesuuf fi of isaan ilee qabsoof of qoophesuu qabu.
ABO lola murtessa ta’ee itti adeemuf jiru kanaaf Ogeesoota Warana kana dura qabu biyya keessa fi biyya ala jiratan, Oganoota siiyassa isaa hunda soochoosun fi Dhabbilee Oromoo Bilisummaa barbada ofti qabun, hunda tokkuman soochuusun ama ta’uu qaba.
Qabsoo Gootoon Oromoo heedun itti wareegaman utuu nu lubun jiru yoo harka Habashati kufee seena qoofa uttu hin tanee seera qabsoon itigaafatamuu qabna, sababin isaa wareegama kaffalama ture keessa ga'ee waan qabnuu. Oromoo hundi du'ee dhumu qaba malee kana booda Habasha kamiyuu jala lamfa jirachuu hin qabu.
Injiifannoon ummataa Oromootiif